अचानक पुसमा नै गर्मी किन बढ्यो ? – Khabaarpati
January 11, 2021 January 11, 2021 goodmamLeaveaComment on अचानक पुसमा नै गर्मी किन बढ्यो ?
दिन लम्बिदै जाने र सूर्यले दिने प्रकाश पनि बढ्ने भएपछि स्वतः तापमान बढ्ने उनको विश्लेषण छ । ‘प्रदूषण बढ्यो भने पनि अधिकतम तापक्रम घट्दै जान्छ, तर न्यूनतम तापक्रम बढ्छ । त्यस्तो बेलामा पनि तातो महसुस हुन्छ ।’,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
मुटुसम्बन्धी समस्याको संकेत,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,
यस्ता उपाय अपनाएर बढी पसिना आउने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । तर पनि कम भएन भने चिकित्सकसंग सम्पर्क गर्नुपर्छ ।,,,भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला,,,